Ahoana ny fampiharana ny fahazoana mailaka amin'ny teknolojia manampy | Martech Zone
Talata, Janoary 29, 2019 Alahady 3 Febroary 2019 Douglas Karr
Misy faneriterena tsy tapaka ho an'ireo mpivarotra hametraka sy hanatsara ny teknolojia farany sy ny tolona maro hitazomana. Ny hafatra henoko miverimberina avy amin'ny orinasa rehetra ifaneraserako dia ny hoe ao ambadik'izy ireo. Manome toky azy ireo aho fa, na dia misy aza izy ireo, dia toy izany koa ny hafa rehetra. Ny teknolojia dia mandroso amin'ny hafainganam-pandeha tsy azo tohaina izay saika tsy tantiny.
Izany dia nilaza fa ny ankamaroan'ny teknolojia amin'ny Internet dia natsangana tamin'ny fototra iray izay natambatra ho an'ny olona rehetra, anisan'izany ireo manana fahasembanana. Ireo teknolojia manampy dia mitohy mivoatra haingana toy ny fampiasa amin'ny fitaovana sy ny teknolojia. Ohatra vitsivitsy amin'ny fahasimbana sy ny teknolojia mamela ny olona miaraka aminy hifanaraka:
fandroson'ny ara-pahalalana - rafitra izay manabe sy manampy ny fahatsiarovana.
Emergency - mpanara-maso biometrika sy fanairana maika.
nandre - fitaovana enti-mihaino, fanamafisam-peo ary fanampiana ary koa rafi-peo-to-text.
mivezivezy - prostesis, mpandeha an-tongotra, seza misy kodiarana ary fitaovana famindrana.
Visual - mpamaky efijery, embosser braille, mampiseho braille, fanamafisam-peo, kitendry azo ampiharina, fanampiana amin'ny fivezivezena ary teknolojia azo ampiasaina.
Mba hampidirana ny rafitry ny solosaina dia misy ny rafitra fikirakirana fitaovana sy rindrambaiko ahafahan'ny olona manana fahasembanana sy fahasembanana ampiasaina amin'ny solosaina. Ho an'ireo olona manana fahasembanana ara-batana dia afaka manampy ny fanarahana maso sy ny fitaovana fampidirana lehibe. Ho an'ny fahasembanana amin'ny fahitana, ny mpamaky efijery, ny lahatsoratra an-tsoratra, ny fitaovana hita maso mifanohitra be, na ny fampisehoana braille azo havaozina. Ho an'ny fahasembanana amin'ny fihainoana, azo ampiasaina ny kapila mihidy.
Ny mailaka izao dia mpampita fifandraisana voalohany, indrindra ho an'ireo olona manana fahasembanana. Ireo mpivarotra dia afaka ary tokony hamorona, hamolavola ary hamolavola fanentanana mailaka azo idirana. Ity infographic avy amin'ny Email Monks ity dia hanampy anao hanatsara ny mailakao noho ny fahasembanana amin'ny fahitana, ny fihainoana, ny kognitive ary ny neurolojia.
Ireo mpivarotra mailaka eran-tany dia nitady fomba vaovao hanatsarana ny fifamatorana sy ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitr'izy ireo mailaka. Amin'izany dia misy ny sasany mandray ny haitao mba hahafahan'ny olona mandefa mailaka aminy kokoa olona iray lavitrisa eto amin'izao tontolo izao miaina miaraka amin'ny karazana kilema (loharano: World Health Organization).
Monks mailaka: Ahoana ny fomba ahafahana miditra amin'ny mailaka
Ity infographic ity dia manome ny antsipiriany ny zava-drehetra manomboka amin'ny famoronana atiny, ny fanoritsoritana ary ny firafitra. Ary koa, ny infographic dia manome antsipiriany momba ireo fitaovana azonao ampiasaina:
NIRONGATRA - Fitaovana fanombanana ny fidirana amin'ny tranonkala. Ireo fanitarana ireo dia afaka manampy anao hanombatombana sy hanitsiana ireo olana amin'ny HTML.
A Checker - Ity fitaovana ity dia manamarina pejy HTML tokana raha mifanaraka amin'ny fenitra azo idirana mba hahazoana antoka fa azon'ny rehetra idirana ny atiny. Azonao apetaho aminy mivantana ny mailakao HTML.
VoiceOver - Miavaka ny VoiceOver satria tsy mpamaky efijery tsy miankina izy io. Tafiditra lalina ao amin'ny iOS, macOS ary ny rindranasa anatiny rehetra ao amin'ny Mac.
mpitantara - Narrator dia fampiharana famakiana efijery natsangana tao amin'ny Windows 10.
Miresaka indray - TalkBack no mpamaky efijery Google tafiditra ao amin'ny fitaovana Android.
Ity ny infographic feno, Accessibility mailaka: Ahoana ny fomba hanamboarana ny mailaka azo idirana tonga lafatra:
Tags: teknolojia fanampianabraille embossersfahasembanana ara-tsainafidirana amin'ny mailakabokotra mailakamailaka kopiafonosana mailakasary mailakafirafitry ny mailakampitantarafahasembanana eo amin'ny fahitanateknolojia azo itokisana